Ihe niile gbasara Sulforaphane Mmeju.
Ihe ọ bụla ịchọrọ ịma gbasara mmeju sulforaphane.
1. Gịnị bụ sulforaphane?
Sulforaphane (SFN) bụ sọlfọ nwere onyinye nwere sọlfọ nke a na-achọta na akwa akwụkwọ nri dị ka kabeeji, broccoli, na bok choy. Emere ka egosiputa ihe ahia Sulforaphane n’enye gi ezi aru ike. N'ime nri ndị a, a na-ahụ sulforaphane n'ụdị arụghị ọrụ ana-akpọ glucoraphanin nke bụ nke akụ na - akụ nke glucosinolate ogige.
Sulforaphane na glucoraphanin
Sulforaphane (SFN) na-arụ ọrụ mgbe glucoraphanin batara na myrosinase. Myrosinase bụ ezinụlọ enzymes nke na-arụ nnukwu ọrụ na nzaghachi agbachitere osisi. A na - emepụta enzymes ndị a naanị ma na - akpali ha mgbe emebi ihe ọkụkụ. N'ihi ya, a ga-egbutu, bee, ma ọ bụ taịlị akwụkwọ nri ka ịhapụ myrosinase ma gbaa umefofofofo.
Sulforaphane na nri riri nri
Sulforaphane gbochiri mmeghachi omume mkparịta ụka Primary Human T-Cell site na ibelata Glutathione na Increba ROS. Nke ahụ bụ isi etu esi eme sulforaphane na ihe oriri ikwu. A na-ahụta ọrụ na ọrụ nke mkpụrụ ndụ T-extra extra- na intracellular redox milieu.
N'ime nyocha iji nyochaa etu sulforaphane si metụta ahụike nke imeju, a hụrụ Sulforaphane na glutathione ka ha na-emekọrịta iji mee ka mmetụta dị mma na ahụike imeju nke oke. A hụrụ broccoli na-arụ ọrụ iji mepụta nrụpụta na nhichapụ, na-eme ka GST na-agbalite ma na-agbadata ALT na AST na bekee.
2. Kedu ka sulforaphane si arụ ọrụ?
Egosiwo Sulforaphane ka ọ na-ebute ihe mgbochi ọrịa kansa site na-akpali ihe ntụgharị mara dị ka Nrf2 (ihe dị na nuklia (erythroid-enwetara 2)-like 2). Nrf2 na-edozi nguzozi nke oxidation site na ibelata ihe a na-eme nfe. Nrf2 mgbe a kpaliri gị na - eme ka ahụ gị ike iji wepụta kemịkalụ kemịkal na-eme ka ahụ gị.
A maara na mbelata nke nguzozi nke oke nzuzu n'ihi oke ibu na nri nri hiri nne nwere ike ibute otutu oria. Sulforaphane na-arụ ọrụ iji kwalite nguzo nke oxidation ma na-ebelata oke ibu na nri na-edozi ahụ. Site n'ime nke a, sulforaphane nwere ike ichebe ahụ pụọ n'ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ.
3. Uru ndi Sulforaphane?
Uru Sulforaphane bara uru na - esite n'ike ike nke sulforaphane mezie nguzozi ihe. Ọ na - eme nke ahụ site na ibelata ihe oxidation na mkpụrụ ndụ, yana site na ịba ụba ikike mgbochi nke ahụ gị. Ya mere uru Sulforaphane gunyere;
Ibu ibu dị egwu
Inglụso Ahụ Ọrịa kansa
Ọ na - eme ka ahụike dịkwuo mma
Nwee Ihe Omume Igwu Egwu
Ọgụ Ọrịa shuga
Ọ na - eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ
Nwere Ike Mgbachi
Mbelata mgbaàmà nke Autism
Ọ na - eme ka umeji rụọ ọrụ
Ọ na-eme ka ahụ ike nke anya
Ugbu a, ka anyị tụlee ọrụ ndị dị n'elu na nkọwapụta;
I. arọ ọnwụ
Nri nwere nri inine bu otu n’ime ezigbo echiche. Akwukwo nri di elu n’ime ihe oriri riri n’ime obere kalori, ana-ewerekwa ya dị oke mkpa maka ibi ndụ dị mma.
Sulforaphane na-enye aka ịbelata ibu site na ibelata oke nke abụba visceral. Ihe ndị a na-eme na Sulforaphane na-emekwa ka mmadụ nwekwuo abụba anụ ahụ na-akpali akpali.
SNF na-agbadata ọkwa nke cholesterol, imeju triglyceride, ma melite ndidi glucose na insulin na-eguzogide. N'okwu dị mfe, sulforaphane na-alụ ọgụ oke ibu site na igbanwe ume aru nke aru gi na imezi ihe nke oma.
II. Sulforaphane na-alụ ọgụ mkpụrụ ndụ cancer
Ọ dị mkpa ịmara na akwụkwọ nri ọla kọpa na-enyere aka na nchedo ọrịa kansa. Iri nri ato n’ime ise n’otu izu na-ebelata oria onwa iri ato na ato. Oké mbelata nke ihe a bu kansa bu isi ihe mere i kwesiri iji were akwukwo nri a kwa ubochi. Agbanyeghị, enwerekwa ọtụtụ uru ndị ọzọ na - egbochi ọrịa kansa.
Sulforaphane na-alụ ọgụ mkpụrụ ndụ kansa ma na-eme ka mitochondria dị mma sie ike n'otu oge. Ọzọkwa, sulforaphane ntụ ntụ na-ewepụ carcinogens ma na-ebibi mkpụrụ ndụ cancer. SFN na-egbochi mgbochi uto. Nnyocha egosila na sulforaphane na-enye aka n'ibi ọrịa cancer n'ime ụmụ nwoke.
The results nke ntụ ntụ sulforaphane na ọgwụgwọ cancer na-ekwe nnọọ nkwa na ụlọ ọrụ ọgwụ na-anwale ọgwụ Sulforadex, maka ojiji ọ na-agwọ ọrịa kansa. Ọgwụ Sulforadex bụ ụdị sulforaphane ụdị.
III. Ọgwụ antioxidant Sulforaphane na-egbu nsị
Phytochemicals dị ka sulforaphane bụ ọgwụ na-egbochi ike. Antioxidant Sulforaphane dị ezigbo irè n'ibibi ọgwụ na-adịghị mma. Ihe na-akpata radicals bụ ụmụ irighiri ihe na - emebi mkpụrụ ndụ na - emebi emebi. Ha na-akpụkarị n’arụ anyị n’ihi ọtụtụ ihe. Ihe ndị a gụnyere mmetọ, ihe mgbakwunye nri, ụzarị UV, na ihe nchekwa. Usoro ihe ọkụkụ na-akwụghị ụgwọ nwere ike ịmalite site na usoro eke dịka mgbaze.
IV. Sulforaphane na-eme ka ahụike dị mma
Sulforaphane nwere ike ịkwalite ahụike nke obi gị n'ọtụtụ ụzọ.
Dịka ọmụmaatụ, sulforaphane nwere ike inye aka melite ahụike nke obi gị site na wedata mbufụt. Ọrịa nwere ike ime ka mbelata akwara ozi bu otu n’ime ihe na - ebute ọrịa obi.
Sulforaphane broccoli ntụ ntụ nwekwara ike belata ọbara mgbali elu. Ibelata ọbara mgbali elu nwere ike igbochi gị ịrịa ọrịa obi.
V. Sulforaphane na-egosi Nnukwu Ọrụ Mgbochi Ọrịa
Sulforaphane broccoli ntụ ntụ egosipụtawo ihe omume dị ike nke mgbochi mgbe a na-ekpughere mkpụrụ ndụ ndị oria pụtara ozugbo. Agbanyeghị, enweghi ezigbo ihe ọ bụla gosipụtara ugbu a iji kwado ngwa ya na ndị nwere ọrịa nje.
Sulforaphane broccoli ntụ ntụ na-ebelata nje virus. Productsakingụ ọgwụ sulforaphane na-emekwa ka ihe mgbochi nke sel sel na - egbochi ihe mmadụ.
VI. Sulforaphane na-egosi Mmetụta Ọgụ Ọrịa Shuga
Ọrịa shuga IIdị nke Abụọ bụ otu n'ime ọrịa ndị na-adịghị ala ala na-emetụta ọtụtụ ndị n'ụwa niile.
Ndị na-arịa ụdị ọrịa shuga II enweghị ike ibuga suga shuga na sel ha nke ọma. Nke a na - eme ka ọ sie ike ịchekwa ọkwa shuga dị mma.
Sulforaphane na-agbada ọkwa nke shuga na-ebu ọnụ n'ụzọ dị irè site na pasent 6.5. Mmetụta dị mma dị ike karịchaa ndị mmadụ buru oke ibu.
Ọdịmma Sulforaphane na nchịkwa nke ọkwa shuga dị n'ọbara na-akwadokwa n'ọtụtụ ọmụmụ ụmụ anụmanụ.
VII. Sulforaphane na-emeziwanye ụbụrụ anyị
Sulforaphane dịkwa mma maka ụbụrụ. Ọ bụ otu n'ime kasị ewu ewu na nootropic n'ihi na ọ nwere ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara.
A hụwo ntụ ntụ Sulforaphane iji nyere ụbụrụ na ụmụ anụmanụ aka n'ọtụtụ ụzọ. Iji malite, oriri nke glucoraphanin myrosinase n'oge oge uto na oge ụmụaka na-egbochi mmalite nke enweghị echiche na okenye.
Glucoraphanin gbochiri ọria ọria, na-ebelata ọkwa cytokines pro-mkpali. Glucoraphanin myrosinase gbochiri imebi ncheta na ụmụ oke nwere ọrịa mamịrị. Glucoraphanin myrosinase nyere nchebe pụọ na mmebi ụbụrụ nke nsị CO na-ata ahụhụ na ụmụ oke.
N'ime nyocha sel, Sulforaphane ntụ ntụ nyekwara neurons ahụ n'aka mmadụ pụọ na ngbanwe ikuku nke neurotoxicity.
Nke Asatọ. Sulforaphane na-emeziwanye ahụike nke anya anyị
Igosipụta ìhè n’enweghi ike nwere ike ibute nchekasị oxidative nke nwere ike ibute ọtụtụ ọrịa azụ nke mmadụ site na ịba ụba ọnwụ nke mkpụrụ ndụ photoreceptor. Photoreceptor bụ ụlọnga nke na - enweta ọkụ ma tụgharịa ya na akwara akwara.
Sulforaphane na-echebe mkpụrụ ndụ nke ụmụ mmadụ na mmebi nke ìhè UVA. Ọgwụ Sulforaphane na-agbadata ume ala beremia (agbadata ọbara na ikuku oxygen.) Ọnọdụ a na-ebute arụmọrụ nwa na arụ ọrụ mmadụ.
Sulforaphane chebere mkpụrụ ndụ oghere n'ime mmadụ pụọ na nrụgide oxidative. Ọzọkwa, Sulforaphane nwere ike inye aka na mgbochi megide nsogbu ịwa ahụ mgbe a wachara ya ahụ.
IX. Sulforaphane na-eme ka Nrụ ọrụ na-arụ ọrụ
N'ime ụmụ mmadụ nwere imeju mara abụba, ngwaahịa sulforaphane na-eme ka ọrụ nke imeju dịkwuo ala ma belata γ-GTP, ALP, na ALT. N'ime anụmanụ, glucoraphanin chebere ya n'ọrịa dịgasị iche iche nke ọrịa imeju nke nri kalori, kemịkal na-egbu egbu, mmanya na ọgwụ.
Ọtụtụ ọgwụ dịka sodium valproate nwere ike ibute nsị na imeju. N'ime ụmụ oke, glucoraphanin myrosinase mere ka ọrụ nke imeju belata ALP, ALT, na AST. Ngwakọta a mekwara ka mmebi imeju na - emebi emebi.
X. Sulforaphane Mmeju Mbelata akara nke autism
Ebe a na-achịkwa placebo, nke gbara ìsì ugboro abụọ na ụmụ nwoke nwere ọrịa Autism hụrụ na nri SFN belatara ihe mgbaàmà autism. Ihe mgbaàmà ndị a gụnyere hyperactivity, lethargy, stereotypy, na mgbakasị ahụ. Ndị bịaranụ riri oke ihe dị iche iche nke broccoli kwa ụbọchị. Ọnụ ego a rụụrụ ha ọrụ nke ọma.
XI. Sulforaphane ike Ala Mpekere
Iwere gram 20 nke brọkọlị kwa ụbọchị na-ebelata ihe mgbaàmà nke afọ ntachi na ndị mmadụ na-ata ahụhụ.
4. Nsogbu Sulforaphane
Ihe ndị dị n'akụkụ Sulforaphane abụghị otu n'ime nchegbu kachasị mkpa ị kwesịrị ịtụle tupu ị were SFN. Sul sulụ ọgwụ sulforaphane n'ụzọ hà nhata ka a na-enweta ya na akwụkwọ nri dị gị mma. Ọnụ ego dị otú ahụ na-egosi ihe ole na ole ma ọ bụrụ na ọ nwere mmetụta ọ bụla dị n'akụkụ sulforaphane.
Ọzọkwa, ntụ ntụ sulforaphane nnukwu ego dị maka ọrịre na weebụsaịtị dị iche iche na ụlọ nri nri ahụike dị ka mgbakwunye ma ọ bụ maka iji na nyocha na mmepe ọgwụ. A na-echekwa ọgwụ ndị a sulforaphane nchekwa.
A na - esite na mmiri a na - enweta sulforaphane site na ahịhịa broccoli ma na - etinyekarị uche ya mgbe niile, nke pụtara na ha nwere SFN karịa karịa n'ihe a na-ahụ na nri.
Glucoraphanin nke bụ ihe ga-enyere SFN aka dịkwa n'ụdị mgbakwunye mgbakwunye myrosinase maka ịgbalite. A na - azụ ahịa Groscoraphanin myrosinase dịka ụzọ isi mepụta mmepụta nke sulforaphane n'ahụ. Nchikota a egosighi ihe omuma ojoo ojoo o bula.
Ọ bụ ezie na anyị enweghị ọgwụ ọgwụ ọgwụ sulforaphane nwere, ọgwụ ndị ọzọ na-atụ aro ịkarị ihe dịka 400 mcg kwa ụbọchị. Nke a bụ otu na ka akpa abụọ.
Agbanyeghị, mmetụta dị n'akụkụ sulforaphane dị nro. Ha gụnyere:
Mmụba na gas
5. Kedu ebe ị nwere ike ịchọta sulforaphane?
Broccoli na akwụkwọ nri ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ dị ukwuu na sulforaphane. SFN na-arụ ọrụ nke ọma mgbe broccoli na-ama pokopoko tupu ito n’ime osisi ị na-ahụkarị n’ụlọ ahịa nri gị. Mmebe Sulforaphane na-arụ ọrụ na-abakwara ọgaranya na SNF. Na nchịkọta, edepụtara n'okpuru bụ isi nri nke sulforaphane:
Ihe enyemaka Sulforaphane na-arụ ọrụ
Brassicas ndị ọzọ dị ka Brussels pulite na cabbages
6. Ihe omume Sulforaphane
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nweta onunu ogwu gị site na nri eke, SFN Mmeju bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa ngwa iji nweta ọgwụ gị kwa ụbọchị nke phytochemical dị mkpa. A na-esite na Sulforaphane Supplement si broccoli pupụtara ma na-etinyekarị uche ya iji hụ na ha nwere phytochemical SFN karịa ihe ị nwere ike inweta site na nri.
Echere na Sulforaphane Supplement onunu ogwu bu n’ime mmadu bu:
11 ruo 57 mg maka mmadụ na-atụ 250 lb
9 ruo 45 mg maka mmadụ na-atụ 200 lb
7 ruo 34 mg maka mmadụ na-atụ 150 lb
Iji jide n'aka na ị ga-enweta ọgwụ ngbanwe sulforaphane ngwa ngwa, ịnwere ike ịchọrọ ọgwụ sulforaphane na ndị na-ere ịntanetị, ụlọ ahịa nri, ma ọ bụ na weebụsaịtị anyị.
7. Ebee ka ịzụta sulforaphane ntụ ntụ?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ntụ ntụ sulforaphane, chọọ a emeputara onye nrụputa onye nwere ihe omuma, omuma na ngwa oru di elu choro na mmeputa nke phytochemical. Ikwesiri ijide n'aka na ị na-eme ka sulforaphane ntụ ntụ si n'aka onye na-ere ahịa nwere ntụkwasị obi na onye nwere aha ọma iji zere ịzụrụ ngwaahịa dị ala.
Younwekwara ike inye anyị iwu sulforaphane ntụ ntụ maka nyocha gị ma ọ bụ ihe mmeju gị. Anyị nwere ikike iji hazie sulforaphane ntụ ntụ buru ibu ngwa ngwa ma nyefee US, Europe, Asia, na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
A kọwara Glucoraphanin dị ka ihe na-ebute sulforaphane. N'aka nke ozo, Sulforaphane bu ezigbo ihe ndu sitere na enzymes Phase II, nke na - emebi otutu udiri mmeru ogbe, ihe na - adighi nma, ma na - ebute ihe ogwu na - aga n'ihu.
Achọrọ enzyme Myrosinase iji nyere aka na ntụgharị nke glucoraphanin na sulforaphane. Ọzọkwa, enwere ihe àmà sayensị nke na-akwado mmepụta sulforaphane site na glucoraphanin site na gut microflora,
Nchọpụta ọhụụ sitere na Universitylọ Akwụkwọ Ọgwụ Mahadum Johns Hopkins gosipụtara na sulforaphane bioavailability sitere na azụmahịa mgbakwunye glucoraphanin ha nhata ahụ nke a hụrụ
Atwell LL, Zhang Z, Mori M, Farris PE, Vetto JT, Naik AM, et al. Sulforaphane bioavailability na ọrụ chemopreventive na ụmụ nwanyị mere atụmatụ ịmịcha ara. Ọrịa Cancer Res Res. (2015) 8: 1184–91
Ndidi, CA; Fassett, RG; Coombes, JS (2013). "Sulforaphane: Nchọgharị ntụgharị okwu site na laabu laabu n'ụlọọgwụ". Nyocha Nutrition. 71 (11): 709–26.
Singh SV, Herman-Antosiewicz A, Singh AV, Lew KL, Srivastava SK, Kamath R, et al. Sulforaphane-indu na G2 / M na-agbatị usoro a na-emetụta ọnụnọ nlebara anya nke abụọ nke usoro mgbasa ozi sel nke 2C. J Biol Chem. (25) 2004: 279–25813.
Manish Kumar Tiwari, Nihar Ranjan Jena, Phool Chand Mishra. Chanzọ nke sisitemu na-enyocha superoxide, hydroxyl, nitrogen dioxide na radho methoxy site na allicin: ọrụ dị egwu nke superoxide dismutase na radieshon superoxide. Journal of Chemical Sciences 2018, 130
1.Gini bu sulforaphane?
3.Sulforaphane bara uru?
5. Ebee ka ị nwere ike ịchọta sulforaphane?
7. Kedu ebe ịzụta ntụ ntụ sulforaphane?